SPA သွားခြင်းကြောင့် လေဖြတ်စေနိုင်သော အချက် ၃ ချက် - Hello Sayarwon
SPA သွားခြင်းကြောင့် လေဖြတ်စေနိုင်သော အချက် ၃ ချက်
Dr. Ye Mhan Linn မှ ရေးသားသည်။ 18/07/2020 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
SPA သွားခြင်းသည် အလှအပရေးရာနှင့် စိတ်အပန်းပြေစေခြင်းတို့တွင် ခေတ်စားလာပါသည်။ သို့သော် SPA သွားခြင်းနှင့် လေဖြတ်ခြင်း ဆက်စပ်နေကြောင်း ဤဆောင်းပါးတွင် တွေ့ရှိနိုင်ပါ မည်။
အချို့သည် အိမ်တွင် ခေါင်းလျှော်ရခြင်းထက် SPA တွင် ခေါင်းလျှော်ရခြင်းကို နှစ်သက်ကြပါသည်။ လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရ အချို့ လေဖြတ်လူနာများသည် SPA မှအပြန် လေဖြတ်သည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ အကြောင်းရင်းမှာ ခေါင်းလျော်ရာတွင် သုံးသော ခုတင်၏အစွန်းမှ ဦးခေါင်းကို ထုတ်ထားခြင်းသည် လည်ပင်းကို နောက်ဘက်သို့ ဆွဲဆန့်ထားသကဲ့သို့ ဖြစ်စေပါသည်။ ယင်းပုံစံသည် ဦးနှောက်ထဲရှိ သွေးစီးဆင်းမှုကို နှေးကွေးစေပြီး ဦးနှောက်ထဲ သွေးဖိအားများစေပါသည်။ ထို့ကြောင့် ပြင်းထန်သော မူးဝေခြင်း၊ မျက်နှာတွင် ထုံကျင်ခြင်းတို့မှသည် လေဖြတ်သည်အထိ ဖြစ်စေ နိုင်ပါသည်။ အသက်ကြီးသူများတွင် ယင်းကဲ့သို့ ခေါင်းကို အလွန်အမင်းဆန့်ထုတ် ထားရခြင်းသည် ပြင်းထန်သော အန္တရာယ် ဖြစ်စေပါမည်။
ထို့ကြောင့် ခေါင်းကို နောက်သို့ အလွန်အမင်းဆန့်ထုတ်ထားရခြင်းကို ရှောင်ကြည်သင့်ပါသည်။ လိုအပ်ပါက လည်ပင်းဒေါက် တပ်ထားနိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ ခေါင်းလျော်နေစဉ် မူးဝေခြင်း ဖြစ်နေပါက ဦးနှောက်ထဲသို့ သွေးမလုံလောက်သည့် လက္ခဏာ ဖြစ်နိုင်ပြီး လည်ပင်းအနေအထားကို မိမိအတွက် အဆင်ပြေသော ပုံစံကို ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့် သက်သာစေပါမည်။
အင်အားသုံး နှိပ်နယ်ခြင်းကို ရှောင်ကြည်ပါ
မျက်နှာကို နှိပ်နှယ်ခြင်းသည် သွေးကြောများကို ပျက်စီးစေခြင်းနှင့် သွေးခဲခြင်းများကို ဖြစ်စေပါသည်။ လျှပ်စစ်အားသုံး အနှိပ်စက်များ သုံး၍ လည်ပင်းနှင့် ပခုံးကို နှိပ်နှယ်ခြင်းသည်လည်း ယင်းနေရာရှိ သွေးကြောလေးများကို ထိခိုက်စေပြီး သွေးခဲလေးများကို ဖြစ်ပေါ် စေပါသည်။ ယင်းသွေးခဲလေးများသည် ဦးနှောက်ထဲ ရောက်ရာမှ လေဖြတ်ခြင်း ဖြစ်စေနိုင်ပါမည်။ ထို့ကြောင့် မျက်နှာ၊ လည်ပင်း၊ ပုခုံးစသော နေရာများကို အင်အားသုံးဖိနှိပ်ခြင်းကို ရှောင်ရှားရန် လိုအပ်ပါမည်။
လေ့ကျင့်သင်ကြားထားသော ကျွမ်းကျင်သူနှင့်သာ ဆောင်ရွက်ပါ
ဦးခေါင်းနှင့် လည်ပင်းတို့သည် ထိခိုက်လွယ်သော အစိတ်အပိုင်း များဖြစ်ပါသည်။ ယင်းနေရာများကို ထိခိုက်မိခြင်းသည် ဆိုးရွားသော ကျန်းမာရေး ပြဿနာများကို ဖြစ်စေပါမည်။ ထို့ကြောင့် SPA သို့ရောက်လျှင် ကျွမ်းကျင်သူကသာ ဝန်ဆောင်မှုပေးပါစေ။ SPA တွင်ပြုလုပ်သော အနှိပ်ခံခြင်း၊ ခေါင်းလျှော်ခြင်း၊ manipulation ၊ shiatsu ၊ chiropractic treatments စသော SPA တွင် ရရှိနိုင်သည့် ဝန်ဆောင်မှုများကို အရည်အသွေး ပြည့်ဝသော၊ သေချာစွာ လေ့ကျင့်ထားသော၊ အတွေ့အကြုံရှိသော ကျွမ်းကျင်သူနှင့်သာ ဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။
အိမ်တွင် မိမိဘာသာ ဆောင်ရွက်မည် ဆိုပါက အင်အားသုံးခြင်း ကို ရှောင်ကြည်ပါ၊ ကြွက်သား အပေါ်ကိုသာ နှိပ်ပါ၊ လည်ပင်းနှင့် မျက်စိကို သတိထားပါ။ အကယ်၍ နာကျင်ခြင်း၊ မူးဝေခြင်း၊ ထုံကျင်ခြင်း စသော လက္ခဏာများ ရှိလာပါက ရပ်ပါ။
လေဖြတ်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သော အကြောင်းရင်းများစွာ ရှိသည့် အနက်မှ SPA သွားခြင်းနှင့် ဆက်စပ်နေသော အကြောင်းရင်း များကို တင်ပြလိုက်ရပါသည်။ ဤဆောင်းပါးကို လေ့လာခြင်းဖြင့် SPA သွားရာတွင် ဆင်ခြင်ရမည့် အချက်များကို သိရှိပြီး သတိထားနိုင်မည်ဟု မျော်လင့်ပါသည်။
Rare Threat of Stroke at the Beauty Salon. http://www.nytimes.com/1993/04/28/news/rare-threat-of-stroke-at-the-beauty-salon.html. Accessed May 8, 2017.
Vertebrobasilar circulatory disorders. https://medlineplus.gov/ency/article/001423.htm. Accessed May 8, 2017.
Correia PN, Meyer IA, Eskandari A, Michel P. Beauty parlor stroke revisited: An 11-year single-center consecutive series. Int J Stroke. 2016 Apr;11(3):356-60. doi: 10.1177/1747493015620809.
Endo K, Ichimaru K, Shimura H, Imakiire A. Cervical vertigo after hair shampoo treatment atahairdressing salon:acase report. Spine (Phila Pa 1976). 2000 Mar 1;25(5):632-4.
Foye PM, Najar MP, Camme A A Jr, Stitik TP, DePrince ML, Nadler SF, Chen B. Pain, dizziness, and central nervous system blood flow in cervical extension: vascular correlations to beauty parlor stroke syndrome and salon sink radiculopathy. Am J Phys Med Rehabil. 2002 Jun;81(6):395-9.
Park H, Kim H-J, Cha M-J, Lee JY, Koh I-S, Nam HS. A Case of Cerebellar Infarction Caused by Acute Subclavian Thrombus Following Minor Trauma. Yonsei Medical Journal. 2013;54(6):1538-1541. doi:10.3349/ymj.2013.54.6.1538.
Rafferty M, Quinn TJ, Dawson J, Walters M. Neckties and Cerebrovascular Reactivity in Young Healthy Males: A Pilot Randomised Crossover Trial. Stroke Research and Treatment. 2011;2011:692595. doi:10.4061/2011/692595.